हाम्रोखबर बिहीबार, जेष्ठ ८ २०७७
साथी हो ! कोरोनाबाट जोगिनु होला । बाँचे भेटौला । केही तिता अनुभवहरु करेन्टाइनमा बसेको वेला याद आएकोले पुराना र नयाँ कुरा लेख्दै छु। गल्ती भए क्षमाप्रार्थी छु ।
राष्ट्रवादी साथीहरुमा नमस्कार !
तपाईहरुलाई मेरो तर्कबाट राष्ट्रवादी अभिवादन !! दुनियाको पल्लो छेउमा छु । एटलान्टिक समुन्द्रको किनारमा बसेर तपाईलाई यो चिट्ठी लेख्दै छु ।
जब म पंचायतवादी विधार्थी संगठनको नेता थिए त्यस बेला म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्थे र राजनीति रुपमा धेरै सक्रिय थिए। देशभरी कलेजहरूमा संगठन गर्न केही साथी हरु सहित गएको थिए ।
संगठनको केन्द्रीय महाधिवेशन बैशाखमा गर्ने तयारी हुँदै गर्दा पंचायतको विरुद्ध आन्दोलनले उग्र रुप लियो र पंचायत गयो। त्यस बेला मेरो नेतृत्वमा विद्यार्थीहरुले एभरेष्ट होटल घेरी चन्द्रशेखर लाई फिर्ता जा भन्ने नारा लगाउँदै एभरेष्ट होटल वानेश्वर ’ को पर्खालमा चढेर मैले भाषण गरेको थिए । त्यो मेरो फोटो भारतिय मायाँ पत्रिकाले छापेको थियो । पंचायत विरुद्धको आन्दोलन चर्किदै गयो । सडकमा विद्यार्थीहरुको प्रतिकार को मोर्चा समाल्दै गएं। आखिर पंचायत ढल्यो ्र
त्यसपछि नेपाल बस्न नसकेर म र तत्कालिन युवक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राप्रपा नेपालका महामन्त्री स्व. चन्द्र बहादुर गुरुङ भारतको बैङ्लोरमा ९महिना बस्यौं । बैङ्गलोर बसाईको पिडा पछि लेखौला ।
यहाँ एउटा प्रसङ्ग लेख्न चाहन्छु —(तत्कालिन अवस्थामा पंचायत एक जना उपसचिव नुतन देव खनालले चलाउनु हुन्थ्यो । उनीसंग राजनैतिक कुरा गर्दा लाग्थ्यो पंचायत पनि कुनै राजनैतिक व्यवस्था हो ?
एक दिनको कुरा हो राजदरवार बाट विश्व विद्यालयको सिनेटमा राजाबाट मनोनित गर्न मेरो नाम र कोमल ओलीको नाम पठाई दिनु भनेर दरवारका सचिव चिरन शम्सेरले फोन गरेर जाँचबुझ वाट सिफारिस आजै पठाउनु भन्नु भो । आधा घण्टा मेरो बारेमा पोल लगाएर मेरो नाम रोके नुतन देवले। ऐले पनि नुतन देव जिउँदै छन् सत्य बोले स्पष्ट हुन्छ । यो कुरा उनले मेरै साथी गोपी घिमिरेलाई अगाडि राखेर कार्यालयबाट १ बजे दिउसो फोनमा भनेका थिए।
उनको एउटै मात्र उद्देश्य थियो उनका भतिज जयन्त खनाललाई सिनेट बनाउने या जसरी नी मलाई रोक्ने । त्यो गराउन उनले मेरो सहमती लिनै पर्ने थियो । म आफै मनोनित हुने निश्चित भए पछि त्यो गर्न आँट गरेनन्। यो रिस मैले थामि रहेको थिएँ । नुतनको कार्यकाल सकिन लागेको थियो । त्यही बेला मैले स्व .राजा विरेन्द्र संग दर्शन भेट गर्न मौका पाएँ । मलाई राजासंग भेटाउने काम रेवतीरमण खनाल दरवार का मुख्य सचिव ले गराउनु भएको थियो ।
नुतनदेवले लगाको गुन यसरी तिरेकी जाचबुझ समिति बाट लोकसेवा आयोगमा जान सक्ने बाटो पनि बन्द गर्न भ्याए । त्यो करीव एक घण्टाको भेटमा मेरो कुरा यसरी सुनाए कि कुनै शब्द छैन । त्यसपछि म भित्र एउटा चेतनाको ढोका खुल्यो ।
साथीहरु, यो सब किन लेख्दै छु भने म माथि त्यस बेला भएको अत्याचार को ज्वाला मेरो छातिबाट कहिल्यै निभेको छैन । म माथि करीव ३१वर्ष अगाडि भएको अत्याचार र आज तपाईहरु माथि हुँदै गरेको अत्याचारमा पात्रहरू फरक छन्, समय फरक छ तर सोचाईमा केही फरक भेटेको छैन ।
पंचायत राजनैतिक व्यवस्था नभएर दरबारले चलाएको एउटा ल्न्य थियो । त्यसैले पंचायत जाँदा एक जना पंचको आँखाबाट आँशु आएन । पंचहरु लाई कमैया प्रथा उन्मोलन भए जस्तो भाको थियो। दरबारका सचिवका कुकुर घुमाउने र फूलमा पानी हाल्ने हरुवाट रापसमा मनोनित र अञ्चलाधिश मन्त्री बनाइथ्यो । राजनैतिक चेतना भएका बुहिजीविहरु संग पंचायतको गोरु बेचेको साइनो पनि थिएन।
साथीहरु तपाईहरु ऐले राजनैतिक दलमा क्रियाशिल हुनु हुन्छ । तपाईहरु भोकै लडेको, घरवार परिवार छोडेर केही गर्न सकिएला भनेर राष्ट्रवादी आन्दोलनमा हिडेको ३० र४० वर्ष भो । धेरै चोटी सत्तामा पुगे नेताहरु ।
पार्टीको लागि तपाईहरुले बगाएको पसिनाले अर्को कालिगण्डकी बन्दछ। तर पनि तपाई ३० औ बर्ष पछि लागेको नेताले तपाईलाई चिन्दैन । सत्तामा पुगेका दिन तपाईले यिनीहरुको अनुहार पनि देख्न पाउँनु हुन्न ।
हामीले यिनीहरुको अनुहारलाई विचार ठान्यौ । यिनीहरुको बोलीलाई देववाणी ठान्यौ । तर यिनीहरुले मन्त्रीपद लाई नै सिद्धान्त बनाएर खाए। आफूले मात्र होईन तपाईहरुले पार्टीमा बगाएको रगत र पसिनामा आफ्ना छोराहरु लाई, बुहारी हरुलाई, दाजु भाईलाई, ज्वाईलाई, सम्धिलाई ,जेठानलाई, ससुराली मामलीलाई पौडि खेलाएर आनन्द लिई रहेका छन् । अब सोध्नु पर्छ सत्तामा पुगेपछि गरेका कामको स्वेत पत्र किन जारी नगर्ने ? के हिम्मत छ ? छैन ।
साथीहरु तपाईहरुले भोली भोग्ने नियति पनि मेरो जस्तै हो । मैले पनि राष्ट्रवादी आन्दोलनमा धेरै रगत पसिना बगाएँ। एक दिन पनि कुनै मेरो काम गरिदिनु भनेर यिनीहरुकोमा गइन । यिनीहरुबाट मेरो काम हुदैन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो।
तसर्थ यिनीहरु मात्रै आफ्नो जिल्लाका , जिल्ला पनि होइन आफ्नो चुनाव क्षेत्रका सामसद्का उमेद्वार मात्र हुन्। राष्ट्रिय राजनैतिक चरित्रको अभावमा नातावादको भाषमा मासिएका छन । कार्यकर्तालाई उचित मूल्याङ्कन र स्थान नदिदा राष्ट्रवादी पार्टी खरानी भएको कुरा जानकारी नै छैन यिनलाई नत आत्माआलोचना ।
हेर्दै जानु होला पार्टी भित्र ठूलो दवाव समूह बनाउन सक्नु भएन भने फेरी पार्टीलाई आफ्नो परिवारको नाताको लागि बाबुले अंशमा दिएको टारी खेत बनाउनेछन् । पार्टीलाई जुम्लाका भेडी गोठाला ले लगाएको ३५ वर्ष पुरानो, कहिल्यै नधोएको, सयौ ठाउँ टालेको, खोलेर भुइमा राख्दा ठिङ्ग उभ्भिएर बस्ने कोट बनाउने छन् ।
अब दुईटा आन्दोलन गर्नु होस् । एउटा पार्टी भित्रको विकृतिको विरुद्ध अर्को जनताको विचमा वैचारिक र संगठनिक । यसो नगरे जो आज म र जस्ता साथीहरु मुङ्लानमा हजारौको संख्या आई पुगेका छौ तपाईहरूको पनि भविश्य यस्तै हुने हो । बाँकी जीवन श्रम शिविरमा झै बित्ने छ ।
अन्त्यमा म्यागुतो ले पेट फुलाउँदा पेट नै फुटेर मरे जस्तै चाकडीले नेताको पेटमा हावा भर्ने काम बन्द गर्नुहोस । हरेक नेताका कामहरू गलत भए गलत र सही भए सही भन्नु होस । यिनीहरु तेस्रो ग्रहबाट पृथ्वीमा आएर हाम्रा नेता भएका होइनन्। यि लोभीपापीबाट पार्टी र आफ्नो भविश्य जोगाउनु होस । अस्तु
तपाईको सहयात्री साथी
महेन्द्र बहादुर सिंह ७ दिन अगाडी
डा. सन्जिव कुमार हयोजू २२ दिन अगाडी
कमल थापा २९ दिन अगाडी
जनताले मुलुकको राजनीतिक यात्रा र गन्तव्यका बारेमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ